Nihitsoka nandritra ny enina andro ny tranonkala ‘Sudan Vote Monitor’ fanaraha-maso ny fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2010 6:48 GMT
Nihitsoka nandritra ny enina andro ny Sudan Vote Monitor, tranonkala mpanaramaso ny fifidianana, tamin'ny herinandro lasa teo. Nanao tatitra mikasika ny tsy fandehanan'ity tranonkala ity Reportrs Sans Frontière ary nangataka ny hamahana tanteraka ity sakana ity.
Sehatra malalaka iray natsangan’ny fiarahamonina sivily Sodaney nampiasana ny rindrambaiko misokatra, Ushahidi, ny Sudan Vote Monitor, mba hanaraha-maso ny fifidianana ao amin’ny firenena. Ny tranonkala dia ahafahan’ny teratany mitatitra ny tsy ara-dalàna amin'ny fifidianana .
Afaka mahafantatra bebe kokoa mikasika ity tranonkala ity ianao ao amin'ny fanadihadihana nataon’i Rebekah tamin’ny Fareed Zein, izay mitarika ny tetikasa Sudan Vote Monitor.
Niampanga ny fitondrana tamin’ny fampihitsohana ny tranonkala ny mpitarika ny fiarahamonina sivily any Sudan:
Tamin’ny herinandro lasa teo, niampanga ny fitondrana ireo mpitarika ny fiarahamonina sivily Sodaney noho ny fampihitsohana ny tranonkala tsy miankina, ny Sudan Vote Monitor.
Save Darfur nitatitra fa nihitsoka koa ny You Tube tany Sudan taorian’ny fandefasana ny rakitsary iray mampiseho ny hosoka atao amin’ny fifidianana:
Torak’izany koa, nolazaina fa nihitsoka tany Sudan You Tube taorianan’ny nandefasana rakitsary iray nampiseho halatra tamin’ny fifidianana tany amin'ny faritry ny ranomasina mena.
Tamin'ny volana Aogositra 2009, ny mpanoratra Sodaney Drima nitatitra mikasika ny fihitsohan’ny You Tube tany Sudan.
Araka ny Fanapahan-kevitry hisian'ny Aterineto Arabo Mivelatra, Ny « National Telecommunication Corporation (NTC) » any Sudan dia manana sampana manokana afaka manivana ny vaovao azon'ny mpampiasa aterineto any Sudan idirana. Efa nanomboka ny taona 2003 ny fampihitsohana tranonkala teto amin’ny firenena..
Tamin'ny 2007, 41 ireo tranonkala nosokajiana ho lisitra mainty araka ny governemanta ZANU-PF any Zimbabwe, ao anatin'izany ny Global Voices Online. Ny taona 2008, nampahafantatra i Mohammed Keita fa tsy afaka hidirana ny tranonkalan'ny Komity mpiaro ny mpanao gazety tany Etiopia.
Nitatitra ny OpenNet Initiative tamin’ny Septambra 2009 fa namorona lalàna mikasika ny fanasivanana i Etiopia ny amin'ny fampikatsoana ny fifandraisana amin’ireo blaogy be mpanaraka ary ireo tranonkalan’ny fikambanana mpampita vaovao maro.
Mba hanarahana ny asan’ny fanasivanana mahazo ny tambajotra ara-tsosialy sy ny ankabeazan'ny tranonkala Web 2.0, tsidiho ny lisitr'ireo tranonkala tsy afaka tsidihina narafitry ny Global Voices Advocacy. Ny Global Voices Advocacy dia tetikasan’ny Global Voices Online, izay mikasa ny hanangana tranonkala mahafaobe iray ho an’ny mpitoraka blaogy sy ireo sehatra maro ara-aterineto miaro ny zo amin’ny fahafahana maneho hevitra malalaka ary fananan-jo hanaraka vaovao amin’ny aterineto.